DHIRTA ORNAMENTAL: SHARAX, SAWIR, MAGAC, UJEEDO, NOOCYO - SOOSAARKA DALAGGA
Muuqaalka muuqaalka iyo kala duwan ee kala duwan soo jiidan beeraley iyo ubax jecel qurxiyo si ay u iibsadaan, dhirta iyo beeraha dhirta ornamental. Sifixyadooda kala duwan waxay ku fiican yihiin jardiinooyinka qurxinta, sariiraha ubaxa ama balakooniyada iyo daaqadaha magaalada. Doorasho ballaadhan oo noocyo kala duwan leh iyo isku-dhafidooda guulaysta waxay u oggolaanayaan inay qurxiyaan oo sameeyaan meelo soo jiidasho leh, iyo haysashada macluumaadka aagga ku yaala waxay suurtagal noqonaysaa in aan lumino wakhtigii iibka.
Waa maxay dhirta ornamental
Dhirta ornamental waa la koray si ay u fuliyaan shaqadooda ugu weyn - qurxinta.
Iyadoo ku xiran xaaladaha sii kordhaya, dhirta ornamental waxaa loo qaybiyaa noocyada soo socda:
Waa muhiim! Dhammaan dhirta qoyaanka ee dhirta qummaatada ee ku taal aquarium ayaa joojiya kobcintooda.
Haddii ku saabsan beerta iyo dhirta gudaha way socotaa, ka dibna aragtida aquarium waxay u qalantaa dareen gaar ah.
Dhirta jilicsan - Tani waa dhirta biyaha ah, oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo dheelitirka nafleyda ee akquumada. Waxaa jira saddex nooc oo ah dhirta biyaha ah:
rooting dhulka - Feerka Hindiya, kaneecada yar-yar-yar-yar-yar-yar, xayawaanka, hemianthus, pogostemon helfer, valisneria, limnophila, iwm;
qulqulaya qaybta biyaha - xayawaanka javanese, dhagax monosolenium, egagropila, iwm;
dushiisa biyaha dushiisa - Duckweed yaryar, feero, raajiyo dabaasha, azolla, stalker stalker.
Dhammaan noocyada dhirta dhirta qoyan, kuwa aan qabyada ahayni waa: Feerka Hindiga, Mastarro Javanese ah, Duckweed yar.
Feerka Hindiya, marka lagu daro degitaanka bilowga ah ee saxda ah, uma baahna wax daryeel ah qofka. Waxay leedahay caleemo lakala jaray caleenta cagaaran oo si fiican u dhajisey dhir kale. Moss jos waa dhirta dhakhso u koraya, sidaas darteed, waxay u baahan tahay goynta goynta ah. Qurxinta oo u muuqata mid aad u fiican xaafad kasta, waa meel lagu kalsoonaan karo ukunta kalluunka. Duck yar yar uma baahnid daryeel gaar ah, marka laga reebo khafiifinta, iyo, dusha sare ee dusha sare, shoog saarka iftiinka qorraxda. Marka lagu daro qurxinta dusha sare, sidoo kale waa qayb ka mid ah cuntooyinka qaar kalluunka.
Sida loo doorto dhirta: talooyinka guud
Marka la qorsheynayo helitaanka dhirta ornamental, waa muhiim in la go'aamin karo tayada la rabo:
shuruudaha koritaanka: sariirta, beerta ama xaaladaha guryaha;
maxay yihiin shuruudaha iftiinka: iftiin-jecel, hoos-u-dulqaadasho ama hoos u-dulqaad ah;
taas oo xilli sii kordheysa ayaa la doorbidaa: sanad ama sannadkii;
nooca qurxinta: geed, geed ama ubax;
cabirkee ayaa laga filayaa mustaqbalka: gaaban, dhexdhexaad ah, dheer;
waa maxay daryeelka la qorsheeyey: aan qabin ama u baahan daryeel gaar ah;
Waa maxay qiimaha la oggol yahay marka la iibsanayo.
Waa muhiim! Noocyo tiro badan oo dhirta ornamental ah waa sun. Maaddooyinka ku jira casiirkooda - saponins, glycosides iyo shafiska ayaa sababi kara gubasho, falcelin xasaasiyadeed haddii ay ku dhacaan maqaarka, iyo haddii ay ku dhufaan xuubabka xajiinta waxay keenaan sumeyn.
Iyadoo ku xiran qeexitaanka shuruudahaan, xulasho dheeraad ah waa in la sameeyaa.
Wakiilada ugu muhiimsan beerta
Qeybta aasaasiga ah ee beerta, oo sii kordhaya dhirta mustaqbalka, waa geedo iyo geedo, taas oo, markaa, waa loo kala qaybin karaa dherer iyo xajin, iyo sidoo kale dhirta iyo dhirta ornamental.
Dhammaan dhirta noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee looxa dhajin karo dhuumaha iyo caleen.
Geedo qulub leh oo leh foomka caddaynta iyo joogtada ah ayaa ah badbaadada beerta ee bakhaarada. Wakiilo muuqda oo ka mid ah dhirta cagaarka ah iyo dhirta qoryaha, thuja iyo cupresscarpis.
Firax - Geedka daaqsinka ah ee daaqsinka ah, oo leh qaab caadi ah oo qashinka ah oo leh caarad wareegsan. Cirbadaha waxay kuxiran yihiin qaabkooda, cirbadaha cagaaran ee cagaaran oo leh caanaha caanaha ee hoose. Waxay leedahay noocyada kala duwan ee caanaha iyo cirridka cagaaran ama cagaaran-cagaaran ee cirbadaha.
Ma taqaanaa? Muuqaal ka mid ah firfircoonida qoryaha casaan leh jihada sare ee koritaanka.
Thuja - geedkii qarxan ee geedaha ee geedo-geedeedka ah ee geedo-geedeedka. Cirbadaha qotoda dheer ee midabada cagaaran. Qiyaasta ballaaran waxay gaareysaa oo keliya marka ay koraan. Kupressciparis - Geedka qoraxda ah ee alwaaxa oo badan oo ah qaabka kolonovidny. Waxay leedahay laan ka mid ah jihada sare ee korniinka caleemaha yar yar. Geedka ayaa si dhakhso ah u koraya waxana uu gaari karaa 20 mitir dhererka. Xayawaanaadka dilka ah ee noocyada kala duwan ee noocyada qurxinta sidoo kale waxaa ku jira caanno badan oo ku yaal dhulkeena. dhir iyo geed geed.
Waxaa ka mid ah geedo qurxoon oo qoyaan leh waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu caansan:
maple canadian - geed qallafsan oo dheer oo leh midab khafiif ah oo cagaar ah. Waa baraf u adkaysta, waxay jeceshahay iftiinka iyo hooska, marka ay soo degaan ma jecla dhinaca waqooyiga madow;
elmooni-ganaax - geed dheer oo leh shaqo furan. Waxay leedahay taaj culus. Muuqaal ayaa ah joogitaanka miraha ka dib ubax - lionfish ah oval ilaa 1 cm ee size;
Yabaniga guduudan - geed yar oo leh taakuleeye. Caleemaha waa wadnaha oo qaabeeya xididada ka soo horjeeda. Muuqaal gaar ah waa isbeddelka midabada caleenta ee sanadka oo dhan laga bilaabo casaan ilaa buluug-cagaar. Ma kala duwan yahay caabbinta barafka sare mana ku dhacdo goobo qoraxda.
Waa muhiim! Iyada oo la'xaad la'aan la'aanta qoyaan, jaceylka jaceylku wuxuu u nugul yahay inuu hoos u dhigo caleenta.
Laga soo bilaabo geedo qurxoon oo geedo kale ah ayaa loo saari karaa dhammaan bikrada loo yaqaan, alder, chestnut iyo kuwo kale.
Qoryaha ornamental - kooxda ugu ballaaran ee dhirta dilka, oo leh qaabab kala duwan iyo cabbirro. Inta badan kooxda waxaa matalaya dhirta cagaarka ah, laakiin sidoo kale waxaa jira noocyo kala duwan oo cadar ah oo qoyan.
Cabbitaanada ugu caansan ee soo baxa ayaa ah:
juniper - geedo dilaacsan oo leh noocyo farabadan. Cirbadaha cirbadaha, inta badan, oval-qaabeeya, sidoo kale waxay leeyihiin caleemo cabtay. Midabka cirbadaha waa cagaar, laakiin xilliga qaboobaha waxa ay soo iibsadaa midab madow. Khudaarta Juniper waa buluug-cagaar. Buunshuhu wuxuu leeyahay horumar gaaban;
Iska hubi noocyadan soo socda, sida: Cossack, Chinese, kolonovidny, cagaha iyo bikradda.
yew - Warshad cufan oo qoyan oo noocyo kala duwan leh, oo leh noocyo farabadan. Qoryaha intooda badani waa yew yar. Doolarka ayaa aad u cufan, cirbado kale, dhexdhexaad ah, cagaar. Miraha waa muraayadaha casaanka cas;
cypress - warshad farsamo ah oo caan ah oo leh sifooyin kala duwan oo lagu xafidayo. Kaabiga Cypress wuxuu leeyahay korriin gaabis ah mana gaarin dhererka 1 mitir. Cirbadaha waa cufan, xajin, cagaar leh midab buluug ama jaalle ah. Cones waa yar yihiin tiro yar oo ah miraha. Muuqaal gaar ah oo cawsku waa midabka cirridka ah ee cirbadaha muddooyinka xilliga dayrta ee dayrta.
Waxaa ka mid ah caleemaha dhoobo ah oo qoyan, waxaa ku jira xayawaan kale oo caan ah, sida dhoobo, geed, geedo, qashin, microbiota.
Caleemo-qoyan oo aan caadi aheyn ayaa ah:
Thunberg barberry - geedo waaweyn oo leh midab khafiif ah oo caleemo ah oo caleemo, midabka, taas oo ku xidhan xilliga xiga, waxaa lagu beddelay bakteer-casaan. Laamuhu waxay u koraan arcuate, marba marka ay koraan. Waxay diyaarisaa iftiinka iyo hooska qayb ahaan, baraf u adkaysta;
samee caddaan - geed dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah. Caleemaha waa casaan caan ah, caleemuhu waa cagaaran iftiin leh edeg cad oo kala duwan, taas oo xilliga dayrta u helayaan midab casaan. Waxay jecelyihiin meelaha shimbiraha ah, waa wax la aqbali karo in la isticmaalo jarjaran si loo sameeyo taaj;
rybinolistny rowan - geedo hooseeya oo leh caleemo furan oo dheer. Caleemaha iyo caleemaha waxay leeyihiin midab kala duwan oo cagaaran, jaalle, oranji iyo dhar guduudan. Waxaa lagu gartaa caabbinta barafowga iyo u nugulaanta cayayaanka iyo cudurada.
Ma taqaanaa? Xayawaanka, xayawaanka iyo caleemaha ash buurta leh waxay leeyihiin bogsiin caafimaad leh waxaana si weyn loogu isticmaalaa daawooyinka dhaqameed ee dhaqameed.
Dabeecadda qurxinta ee geedaha waxay ka kooban tahay gaar ahaan dhismaha baadiyaha ama midabka caleemaha, iyo kuwa ka mid ah kuwaa waxaa sidoo kale loo yaqaan spiraea, califolia, odayga madow, e-magaciisa Forchun, weigela, iwm.
Qurxin curry ah
Nidaam aan lagama maarmaanka ah ee naqshadeynta beerta ayaa kori doona dhirta. Waxay awoodi karaan oo kaliya inay hagaajiyaan dhulka, laakiin sidoo kale inay qariyaan cilladaha xayndaabka, gaaska, derbiyada iyo qaababka kale ee tooska ah.
Dhammaan dhirta fuulaya waxay leeyihiin muuqaal qurxoon, laakiin qaarkood waxay ka soo horjeedaan asalka guud:
clematis - Liana-perennial oo leh qaabka asalka ah ee caleemaha iyo ubaxyada gawaarida kala duwan, koritaanka buuxda ayaa gaareysa 9 mitir. Waxay si wacan u horumarisaa meelaha la iftiimiyo;
tunbergia winged - Liana hal sanno oo leh horumar dhaqsiyo leh iyo caleemaha asalka ah ee wadnaha ah, daboolay qaansiir adag. Peduncles marar badan, midab madow leh oo leh indho madow. Daryeelka aan qabyada lahayn iyo koritaanka uma baahna xaalado gaar ah;
Kampisy grandiflora - Liana-perennial oo leh caleemo cagaaran oo dhalaalaya iyo ubaxyo jilicsan oo jilicsan. Daryeelka guud ahaan, aan qabin, laakiin xilliga qaboobaha wuxuu u baahan yahay hoy dheeraad ah.
Waa muhiim! Kampsis weyn-ubax ma u dulqaadanayo biyaha iyo abaaraha, oo sidaas daraaddeed waxay u baahan tahay fiiro gaar ah oo ku saabsan heerka qoyaanka ciidda iyo waraabiyo dhexdhexaad ah.
Sidoo kale inta badan laga helaa naqshada beeraha waa wisteria, ipomoea purpurea, nasturtium, hydrangea, actinidia, ivy, hops, iyo kuwo kale oo badan.
Ubaxa waa inuu awoodaa in uu qurxiyo xitaa muuqaalka ugu caansan ee xilliga Dayrta-Xagaaga-Xagaaga. Laakiin natiijadani waxay dhalin doontaa doorashada fikradeed oo sax ah oo kala duwan.
Iyadoo ay ku xiran tahay xilli-ciyaareedka soo koraya, ubaxyada beerta waxay noqon karaan sanadlaha ama dilka ah.
Wakiilada beerta hal sano ah waa:
isku-buuqsanaan - warshad qoryo leh oo leh xilliga ubax ee hore (Maarso-Abriil). Waa baraf u adkaysta, ma aha mid saxan oo ka tagaya, waxay jecel yihiin in ay koraan goobaha iftiinka ah ama kuwa yar yar;
brahikome - ubax leh xilliga xagaaga ee ubax. Florescences ee midabada kala duwan, muuqaalka muuqaalka daisies. Aamusnaan, abaarta u adkaysata. Habka abuurka;
abaalmarin - warshad leh jalbadaha qaababka-ubaxa ah ee ubaxu ku jiro xilliga xagaaga-xilliga dayrta. Faafin by abuur ah, daryeel aan qabyo ahayn iyo adkaysi badan isbedelka xaaladaha cimilada.
Badanaa, sanadlaha si fiican loo yaqaan sida petunia, nasturtium, bindweed, galleyaha, marigolds, iwm ayaa sidoo kale lagu beeray sirqoollada.
Ubaxyo dhoobo ah oo leh abuur soo-saarka ah waa:
Daisy - warshad dhakhso sii kordhaysa oo leh caleemo qoyan iyo ubax oo ubaxyo kala duwan ah. Muddada ubaxu waxay dhacdaa xilliga gu'ga-xagaaga. Uma baahnid daryeel gaar ah oo jecel inuu koro labada goobo qorax ah iyo dhul leh;
Waa muhiim! Caleemaha yaryar iyo burooyinkeeda dhirta ayaa loo isticmaali karaa sida dhir udgoonida diyaarinta cuntooyinka kala duwan ee karinta.
Qaxoontiga - geedo dhakhso u koraya leh xilliga guga-xagaaga xilliga guga, noocyo kala duwan palette midab kala duwan. Ubax foomka tubbada, ururiyey caws ubax. Wuxuu jecel yahay meel bannaan oo iftiimaya ama hooska qayb ahaan;
hydrangea - geed leh caleemo waaweyn iyo ubax badan, noocyo kala duwan oo lagu muujiyey inflorescences ee qaababka iyo midabada kala duwan. Dhammaan xilliga gu'ga iyo xilliga dayrta waxay si joogto ah u ubaxayaan, waa wax aan qabyo ahayn oo u adkaysta abaaro gaaban.
Ubaxyo badan oo la yaqaan ayaa sidoo kale ka mid ah chamomile, peony, rose, jil, iris, iwm.
Xulashada haboon ayaa gacan ka geysan doonta dhammaystirka jamacadda midabka beerta iyo sameynta muuqaalka cimilada gaar ah inta lagu jiro bilaha diiran ee sanadka.
Si fiican u qurxin qolka iyo abuuritaanka raaxo loo yaqaan dhirta gudaha. Waxaad u qaybin kartaa noocyada noocaas ah:
Muuqaal khaas ah oo ubaxyada gudaha ah waa xaqiiqda ah in qurxinta ay ku haboon tahay daryeelkooda ku habboon inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay macallimiinta Shiineeska ee qadiimiga ah, ubaxyada shichiinka ah ee feerka leh caleemo fiiqan oo adag ayaa keena tamar xun guriga.
Ubaxyo caleenta ah oo lagu qurxiyo ayaa ah koox ka mid ah dhirta, inta badan ma ahan ubax, laakiin qiimaha qurxinta ee caleemaha. Kuwa ugu caansan ayaa u qalma:
miriim - geedo yaryar oo caleemo leh oo caleemo qoyan oo caleemo leh cagaaran. Uma baahnid daryeel gaar ah, waxaana lagu qaddariyaa ari qurux badan oo udgoon;
maranth - ubax caleemo leh caleemo cagaaran oo cagaar ah oo ku yaal meel ka soo horjeeda labadooda. Sidoo kale ma dalbaneyso daryeelka oo waxay ku qanacsan tahay midab qurux badan;
codin kala duwan - Warshad leh caleemo guduudan iyo caleemo iyo dhar kala duwan. Daryeelka wuxuu u baahan yahay qadar badan oo ah iftiinka iyo qoyaanka, laga bilaabo la'aanta kuwaas oo daadi kara caleemo.
Araucaria, gemigraphis, cordilina, cyanotis iyo kuwo kale ayaa sidoo kale caleenta ubaxeed.
Ma taqaanaa? Yew - warshad muddo dheer ah, xilli ay sii kordheyso waxay gaari kartaa 3,000 oo sano.
Dhammaan dhirta indoorka ee ubaxa waxay leeyihiin nooc ka duwan qurxinta. Waxay noqon kartaa mid qumman, geed, geedo ama dhir kulul.
A wakiil dhalaalaya dhirta dhirta koritaanka qumman koritaanka waa anthurium. Cimilada qaabka aan caadiga ahayn iyo ubaxyada, iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo midabyo ah ayaa ka dhigaya taabashada qalaad ee xaaladaha guriga. Ubaxa waa mid diirran, sidaas awgeedna wax yar baa ku jira daryeelka.
Akhri 10-ka mid ah dhirta indoor-ka waxtarka leh.
Balsam waxa loola jeedaa nooca buunshaha iyo ubax aan la qabin oo leh waqti dheer ubax. Ubax ballaaran, midab ayaa lagu gartaa midabyo kala duwan. Inkastoo uu yar yahay, caleemaha balsam waxay gaari karaan dherer ah 0.5 mitir. Geedku wuxuu jecel yahay qoyaan.
A geed ubax ah ubax ah waa hibiscus. Hibiscus Blooms si joogto ah, ubax yihiin jilicsan iyo warqad sida khafiif ah. Caleemaha waa kuwo dhalaalaya oo dardar leh, taas oo xaqiijineysa saameynta qurxinta. Waxyaabaha qosolka ah ee ubaxyada ayaa maalinba hal wareegaya, ka dib markii ay ku dhacaan oo ay dhintaan.
Ampel wakiil waa lobelia. Caleemaha dayrta ee loo yaqaan 'decorative curative curds' waxay u baahan yihiin beeritaanka dheriga, taas oo si gaar ah u ah baalkiyada magaalooyinka iyo guntiga. Waxay leedahay ubax badan oo ah midabyo kala duwan oo uma baahna daryeel joogto ah. Ubax wuxuu dhacaa si joogto ah.
Ma taqaanaa? Muuqaal ka mid ah balsam waa awooda ay ku "toogan" abuurka xitaa taabasho iftiin leh midhaha.
Dib u eegida kooban ee dhirta lagu qeexay waa qayb yar oo ka mid ah wakiilada noocyada ornamental. Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee dhirta ornamental waa adag tahay in aan lagu wareerin. Ka hor intaadan dooran inaad doorato, waa muhiim inaad go'aan ka gaartid nooca warshadda iyo ujeeddada aad raadineyso markaad naqshadeynta beertaada ama gurigaaga.